घरमा बल्न लागि प्रभावकारी माध्यम
तातो पानी मान्छे आफ्नो जीवन भर निरन्तर प्रयोग गर्नुहोस्। यसलाई विभिन्न व्यञ्जन र पेय खाना पकाउने लागि प्रयोग गरिन्छ। दुर्भाग्यवश, बेवस्ताई मान्छे गल्ति आफूलाई भन्दा पानी उम्लिरहेको घनघोर भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। अक्सर देखि छाला बच्चाहरु दु बल्छ। र वयस्क बारम्बार यस्तो अप्रिय समस्या सामना गरेका छन्। खैर, यो मात्र पानी नै फलाम मा तातो बोसो वा तातो भाँडा जलाए गर्न सकिँदैन तर पनि। समय अनुवाद पहिलो सहायता बल्न सिकार दुःख सुख मदत गर्नेछ र प्रभावकारी उपचार।
एक जला के हो?
बाल्न - विभिन्न कारक, थर्मल वा रासायनिक प्रभाव अन्तर्गत छाला Tissues गर्न क्षति छ। यस लेखमा छलफल थर्मल बल्न तातो पानी, व्यवहार गर्न तातो तेल र लोक उपचार। यस्तो चोट लागेको छाला खतरनाक मात्र देखिने क्षति हो भनेर याद गर्नुहोस्। कारण जला को विफलता गर्न, चयापचय मा हुन्छ अन्तस्करणले र हृदय। मानिसहरूलाई मा, शरीर तापमान वृद्धि, उल्टी खुल्छ।
तथ्याङ्क अनुसार, यो बल्न मृत्युको कारण सेवा गरेको जो अवस्थामा बीचमा दोस्रो स्थानमा छन्। अक्सर सिकार गर्न पहिलो सहायता को कमी को मृत्यु जान्छ। नजिकै भएका मान्छे, नियम, छैन तातो पानी बल्न लागि अज्ञात लोक उपचार स्वास्थ्य मामिलामा दक्ष, र धेरै छन्। किन यो कुरा मात्र छ घाइते को तीब्र रिकभरी लागि अनुकूल जो पहिलो सहायता, दिन हुन्छ भने त, केहि ज्ञान र सीप छ महत्त्वपूर्ण छ, तर अक्सर आफ्नो जीवन सुरक्षित मा एक प्रमुख कारक हो भन्ने छ।
पानी उम्लिरहेको संग बाल्न: पहिलो डिग्री
पानी उम्लिरहेको संग छाला संग सम्पर्क बाट थर्मल बल्न, चार डिग्री छन्। तिनीहरूलाई को पहिलो विचार गर्नुहोस्। जब यो डिग्री जला epidermis क्षतिग्रस्त छ, प्रभावित क्षेत्र तुरुन्तै रातो र सुन्निएको। मानिस बलियो जलन र पीडा महसुस। यो स्थितिमा के गर्ने? यो एक जला मलम "Panthenol" संग उपचार गर्न सकिन्छ। यो सबै जान्छ केही दिन पछि, त्यहाँ सानो pigmented स्थलहरू छन्। समयमा, तिनीहरू पनि गायब हुनेछ।
जला डाक्टर को सतह उपचार dexpanthenol को सामग्री यसलाई स्प्रे प्रयोग गर्न सिफारिस लागि, एक निको र विरोधी भडकाऊ प्रभाव छ। युरोपेली दबाइ गुणवत्ता को यस्तो घटक भाग - PantenolCprey। विशेषज्ञहरु दबाइ, सुनिंनु को विकास रोक्छ चाँडै बल्न, राता र बल्न अन्य अप्रिय लक्षण relieves याद गर्नुहोस्। PantenolSprey मूल दबाइ, वर्षौंदेखि परीक्षण छ र धेरै लोकप्रिय छ, त्यसैले धेरै समान प्याकेजिङ्ग संग फार्मेसी मा धेरै analogues छ। यी analogues को सबैभन्दा सरल प्रक्रिया हो, नैदानिक परीक्षा को आचरण आवश्यक गर्दैन अन्तर्गत कस्मेटिक्स रूपमा दर्ता, त्यसैले यी धन को संरचना सधैं सुरक्षित छ। संभावित खतरनाक पदार्थ ट्यूमर वृद्धि प्रकुपित गर्न सक्ने - केही अवस्थामा यो parabens समावेश छ। त्यसैले, जब छनौट बल्न लागि स्प्रे गल्ती गर्न हुँदैन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। को संरचना, निर्माण र देश को प्याकेजिङ्ग ध्यान - मूल दबाइ युरोप मा उत्पादन र एक विशिष्ट स्माइली प्याकेज नाम अर्को छ छ। हामी लोक उपचार कुरा भने, उनि लागूपदार्थ विपरीत सधैं चाँडै र कुशलतापूर्वक एक छाला जला उद्धार गर्न सक्षम छन्।
हरेक घरमा बल्न लागि उपाय छ। घर मा, राज्य ताजा बन्दागोभी सुख मदत गर्नेछ। चाँडै एउटा पाना बन्द आंसू राम्रो आफ्नो हात मा यो सम्झना र दुखेको ठाउँ लागू। बलिरहेको हुनेछ, र सुनिंनु कम गर्न सुरु हुनेछ।
दोस्रो डिग्री बल्न गरेर छाला, यसको peeling र blisters को गठन, तरल को पूर्ण बलियो reddening विशेषता छन्। यस बुलबुले फुट्छ गर्दा राता टाढा जाने छैन। शरीर को फसेको ठूलो भागहरु, तरल पदार्थ को एक ठूलो हानि गर्न सुराकी बाल्न। तसर्थ, रोगी तरल पदार्थ प्रशस्त पिउने गर्नुपर्छ। यदि घाउ संक्रमित छैन, एक व्यक्ति दुई बारेमा हप्तामा ठीक हो जाए।
तपाईं ट्याप पानी वा चिसो तरल को एक कचौरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: तपाईं अचाक्ली जलाइएको छ भने, त्यसैले भन्ने blisters, प्रभावित क्षेत्रमा सकेसम्म प्रयास सुन्दर थिए। कुनै पनि अवस्थामा, घाउ बरफ लागू छैन! र अझ राम्रो - स्टेराइल gauze संग प्रभावित क्षेत्र (moistened गर्न सकिन्छ) वा पट्टी ढाक्न, र आफ्नो डाक्टर कल। विभिन्न लागू गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् , बल्न लागि लोक उपचार पानी उम्लिरहेको: प्रयोग मात्र स्थिति बढन हुनेछ। घर-पकाएको nanodiamonds उपयोग गरदै र अन्य साधन एक ठूलो drawback छ: तिनीहरू स्टेराइल छैनन् र संक्रमण कारण छ कि ब्याकटेरिया को लागि एक सिद्ध प्रजनन भूमि हो। यो एक धेरै जटिल उपचार हो।
III डिग्री बल्न छाला र मांसपेशी बलियो विनाश द्वारा विशेषता छन्। पीडित एक जला आघात अनुभव पहिलो पीडादायी, असह्य दुखाइ आउँछ, र त्यसपछि पूर्ण कुरा महसुस वा बुझ्न सक्ने क्षमता गुमायो। पीडित दबाव र नाडी कम। शरीर को ठूलो क्षेत्रहरु क्षतिग्रस्त भने, मृत्यु हुन्छ।
scars - तर बल्न उपचार गर्न गाह्रो यदि पनि, प्रभावित क्षेत्रमा crusts र अल्सर, र अन्तिम उपचार पछि छन्। यसलाई (तेल उम्लिरहेको हेर्नुहोस् - कुरा छैन) मदत गर्दैन बल्न लागि कुनै पनि घर उपचार। बहुमूल्य समय बर्बाद आवश्यकता छैन, राम्रो तुरुन्त डाक्टर कल। तर आफ्नो आगमन अघि संक्रमण भित्र पस्नु छैन ताकि, बाँझ पट्टियाँ संग जलेको ठाउँहरू, कवर।
यो संग डिग्री बल्न छाला charred छन्, नाश ऊतक, मांसपेशीमा, हड्डी। अक्सर सिकार पनि दुखाइ महसुस गर्दैन। यो ताकत अन्त गर्न क्षति संग सम्बन्धित छ। पीडित आवश्यक hospitalized। डाक्टर को आगमन सम्म छाला गर्न फँस वस्त्र हटाउन प्रयास गर्दैन। यो सिर्फ चोट। तर अत्यधिक पिउने लाभ हुनेछ (रोगी सचेत छ भने)। सम्झना: बल्न घर उपचार को उपचार यस्तो अवस्थामा ल्याइनेछ हुँदैन!
उम्लिरहेको पानी बल्छ लागि पहिलो सहायता
यो जला तातो पानी को नकारात्मक प्रभाव कम गर्न तुरुन्तै पछि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो दुखाइ कम हुनेछ र छाला को गहिरो तहहरू विनाश रोक्न हुनेछ। यो गर्न, निम्न के:
तपाईं पूर्ण यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने छिटो लुगा को क्षतिग्रस्त क्षेत्र जारी।
चिसो को धारा अन्तर्गत जलेको ठाउँमा स्थानापन्न, तर 10-20 मिनेटमा लागि पानी बरफ छैन। यो, क्षति को क्षेत्र कम गर्नेछ बुलबुले को उद्भव रोक्न र पुन: गति अप। सम्झना, चिसो पानी अन्तर्गत शरीर को क्षतिग्रस्त क्षेत्र अन्यथा यो चिसो सुरु हुन सक्छ, एक लामो समय को लागि पालन गर्न सक्दैनौं। , दुखाइ कम गर्छ भने, एक बेला चिसो को प्रभाव रोक्न र त्यसपछि लागि फेरि प्रक्रिया जारी यसलाई राम्रो छ। आफ्नै मूत्र - धेरै राम्रो उपाय बल्न लागि भन्ने विश्वास गर्छन्। यो दुखेको ठाउँ प्रशोधन छ।
आयातित (तर bandaged छैन!) पानी moistened स्टेराइल पट्टी संग जलाए क्षेत्र मा। यो निरन्तर moisturize गर्न आवश्यक छ, शुष्क हुँदैन बाहिर। यो संक्रमण फैलाउने रोक्न हुनेछ। हरियो वा कालो: सुन्दर पीसा चिया - तपाईं घरमा बल्न अर्को उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले पट्टियाँ moisten। तिनीहरूले बाहिर सूखी छैन कि मुख्य कुरा। तपाईं चाँडै, आलु धुन सक्छन् यो बोक्रा संग एउटा सानो grater मा अंगीठी र जला मा सीधा मज्जा लागू हुन्छ। यो राता राहत र पीडा कम गर्न मद्दत गर्नेछ। यो एक बाँझ पट्टी संग कवर गर्न आवश्यक छ संकुचन। कुनै अर्को graters, चिया पात, teapot छ भने, आटा लिन र ध्यान जलेको ठाउँमा छिडकना। सफा gauze वा पट्टी संग शीर्ष कवर।
पहिलो छैन, पानी, बल्न उम्लिरहेको कुनै पनि रकम प्रयोग नगर्नुहोस् - तपाईं नेत्रहीन छाला गर्न क्षति को हदसम्म भनेर निर्धारित छ भने। एक बाँझ पट्टी संग प्रभावित क्षेत्र कवर, आफ्नो डाक्टर कल। जबकि तपाईं आफ्नो आगमन लागि प्रतीक्षा, निर्जलीकरण रोक्न धेरै तरल पदार्थ पिउन। hospitalization आवश्यक छ भने, यो त्याग्न छैन। बाल्न - एक धेरै गम्भीर चोट।
तुरुन्तै जला पछि प्रक्रिया समाधान र nanodiamonds उपयोग गरदै प्रभावित क्षेत्र सिफारिस छैन चिकनाना: परिणाम पाप्रो गर्मी स्थानान्तरण deteriorates किनभने।
सम्झना! तेल बल्न, दही, अमिलो क्रीम चिकनाना छैन। लाभ तिनीहरूले ल्याउन, र समय छुटेका गर्न सकिन्छ।
जला blisters ठाउँमा गठन थिए भने, कुनै पनि मामला मा, खोल्न छैन र तिनीहरूलाई पट्टी छैन! Blisters - यो पहिलो डिग्री जला छैन। तुरुन्त आफ्नो डाक्टर कल!
घाउ गर्न बरफ लागू हुँदैन। चिसो सुरु गर्न सक्छन्।
छैन चिल्लो बाल्न गर्छन् आयोडिन, शानदार हरियो वा अन्य रक्सी-समावेश तयारी - यो डाक्टर छाला गर्न क्षति को डिग्री आकलन रोक्न हुनेछ।
यदि छाला शरीरको विभिन्न भागहरु मा बल्न द्वारा क्षतिग्रस्त छ, तिनीहरूलाई छुन छैन गरौं गर्छन्।
तपाईं एक बाँझ पट्टी प्रभावित क्षेत्रमा लागू गर्दा, पानी वा केही अन्य समाधान मा भिगो टेप अप छैन घाउ!
एक व्यक्ति उम्लिरहेको पानी संग छाला गम्भीर क्षतिग्रस्त भएको थियो भने, र उपचार पछि scars थिए, प्राप्त तिनीहरूलाई छुटकारा बल्न पछि लोक उपचार गर्न मद्दत गर्छ। यहाँ तिनीहरूलाई केही हो:
कुक पहेंलो खोल (30 टुक्रा) संग अन्डा मेहनत उसिनेर। मसले yolks सुस्त आगो धारण संग प्यान। जब वजन उज्ज्वल पहेंलो रंग, गर्मी क्षमता हटाउन। एक cheesecloth मा अन्डा yolks राख्न र तिनीहरूलाई देखि तरल बाहिर squeeze। उनको दैनिक आफ्नो पूर्ण लोप गर्न scars चिकनाना।
ध्यान दिएर काट्नु र खरबुजा को बीउ, र अन्डा गोले, बराबर अनुपात लिइएका संयोजन। वनस्पति तेल थप्न, एक मोटी slurry सम्म फेरि हलचल र हरेक दिन दुई लगातार महिना लागि खत मा लागू हुन्छ।
एक सानो जला को मामला मा, मानिस पहिलो सहायता छ। यो कसरी गर्न माथि वर्णन गरिएको छ। पीडित को आवश्यक hospitalization वर्तमान छैन भने, त्यो घर मा उपचार गरिएको छ। यो गर्न, त्यहाँ परम्परागत चिकित्सा को धेरै व्यञ्जनहरु छन्। तिनीहरूलाई केही, यो लेख पाठक परिचय।
जला blisters र फुट्छ गर्न थाले भने, त्यहाँ घर मा बल्न लागि राम्रो उपाय हो। यो घाउ छर्कियो जो आफ्नै पाउडर, मा पकाएको छ। सिमी सिमी जमीन र सुकेको हो। तर यो ओवन मा संक्रामक एजेन्ट हत्या गर्न गर्नुपर्छ।
भगवा को शोरबा हुन सक्छ जला पछि घाउ धुन। यो,2Tbsp गर्न। चम्मच stigmata बिरुवाहरु, 30 मिनेट लागि पानी एक गिलास मा उसिनेर छन् cooled र फिल्टर।
यो कद्दू रस को एक जला संकुचन मा राता र सुनिंनु relieves। एक gauze मनोबल घट्यो र दुखेको ठाउँ यो लागू हुन्छ।
तपाईं बल्न देखि परम्परागत चिकित्सा व्यञ्जनहरु को धेरै कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं संक्रमण फैलाउन छैन भने घर उपचार, राम्रो हो। यो सम्झना र अचाक्ली संलग्न छैन गर्नुपर्छ।
पनि सानातिना बल्न लागि धेरै मान्छे, चिकित्सा ध्यान खोज्नुपर्छ। कि यो एक लामो र पीडादायी उपचार भन्दा सुरक्षित हुन राम्रो छ, ठीक छ। को चोट को खुलारूपमा आधारमा, विशेषज्ञ उपचार prescribes। हाल, पानी, बल्न उम्लिरहेको, जो राता राहत सक्छ, प्रक्रिया अघि बढाउने विभिन्न माध्यम छन् घाउ निको, संक्रमण फैलाउने रोक्नुहोस्। सबैभन्दा प्रभावकारी "उद्वारकर्मी" ड्रग्स "Solkoseril" छलफल र "Panthenol" स्प्रे छन्।
कुनै पनि मामला मा, प्रत्येक रोगी रोगी गरेको सामान्य अवस्था, को जीव को विशेषताहरु र जला को डिग्री आधारमा चिकित्सक द्वारा निर्धारित छ कि एक अनुकूलित उपचार प्राप्त गर्दछ। आत्म-उपचार अस्वीकार्य छ - यो सर्जरी लागि आवश्यकता नेतृत्व भन्ने जटिलताहरू provokes र खराब अवस्थामा - मृत्यु।
बल्न तेल: डिग्री
एक साधारण घरेलू चोट - यो तातो तेल बल्छ। एक विशिष्ठ सुविधा छाला गर्न गहिरो क्षति र छाला बाट हटाउन को जटिलता देखि तातो बोसो लामो समयसम्म जोखिम छ। तेल बल्न खुलारूपमा चार स्तरहरू छन्:
पहिलो डिग्री - छाला को माथिवाला पत्रहरु क्षति द्वारा विशेषता। म स्थिति राता र सुनिंनु छ। यी व्यवहार बल्न घरमा हुन सक्छ।
दोस्रो डिग्री - विभिन्न गहिरो छाला घाउ। तरल मा संग blisters गठन। पीडित दुखाइ महसुस, तर त्यहाँ जीवन कुनै खतरा छ। एउटा सानो जला उपचार त्यहाँ एक स्वभाविक निको छ रूपमा, घर मा बाहिर गर्न सकिन्छ।
तेस्रो डिग्री - छाला को सबै तहहरू को necrosis द्वारा विशेषता छ। रक्तपातपूर्ण गाढा तरल भित्र संग गठन blisters। तिनीहरूले उज्ज्वल रातो सतह पर्दाफास, फुट्छ। गंभीर अवस्थामा, सतह रंग मा गाढा हुन्छ, सिकार दुखाइ महसुस गर्न ceases। यो छाला को रोगाणु तह मरिसकेको छ, र स्वभाविक निको असम्भव भन्ने संकेत गर्छ।
हड्डी, tendons र मांसपेशीमा: - चौथो डिग्री सबै छाला र जन्माउने ऊतक तहहरू को कुल हानि द्वारा विशेषता छ। उपचार अस्पताल वातावरणमा ठाउँ लिन्छ। बल्न लागि कुनै लोक उपाय, घरमा मदत छैन। यस मामला मा, छाला grafts गर्न resorted। मात्र सान्त्वना - घरमा तेस्रो र चौथो डिग्री धेरै दुर्लभ तेल बल्छ।
दुखाइ कम र क्षति सीमित गर्न, यो प्रभावित क्षेत्र शांत आवश्यक छ। यो अन्त गर्न, चाँडै जलाइएको शरीर 10 मिनेट को लागि चिसो चलिरहेको पानी अन्तर्गत स्थानापन्न।
यसबाहेक, तेल एक साबुन समाधान मा डूबा एक कपास swab संग छाला हटाइएको छ।
छाला यस्तो आघात घरमा उपचार गर्न सकिन्छ, अलिकति reddened छ, र साना बुलबुले देखा यदि जला Inspects। बल्न तेल लागि राम्रो उपाय - यो गाढा साबुन। चाँडै फोम मार र यो बाल्न गंदा। यो भीड र edema चक, सोडियम कार्रोप्नेट वा स्टार्च राहत मद्दत गर्छ। तिनीहरूले दुखेको ठाउँ लागू हुनुपर्छ। blisters ठूलो र तरल भरिएको हो भने, हेरविचार एक बाँझ पट्टी संग जलाए क्षेत्र कवर र डाक्टर जान लग्नु गर्नुपर्छ।
अक्सर यो जला तेल घाउ festering पछि हुन्छ। यस मामला मा, हामी रोगाणुरोधी nanodiamonds उपयोग गरदै "Fuziderm" वा "Fuzimet" को प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। यी औषधिहरू Staphylococcus कारण नरम Tissues को संक्रामक सुनिंनु रोक्न। मलम "Fuzimet" छाला को निको बढावा - यो यसको संरचना मा समावेश गरिएको छ जो metiluratsilom, कारण छ।
नम्र बल्न र उपचार को सिकार घरमा बाहिर छ भने, तपाईंले आफ्नो मा तयार गर्न सजिलो हो कि लोक उपचार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई केही व्यञ्जनहरु:
अन्डा र shredded बन्दागोभी बराबर अनुपात मा मिश्रित र जलेको क्षेत्रमा लागू गरियो।
फूल nettle (30 ग्राम) जिद्दी3घन्टा, उम्लिरहेको पानी (1 लीटर) खन्याइन् र फिल्टर छ। को जलसेक एक संकुचन रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
त्यहाँ एक मह छ भने, यो बल्छ चिकनाना गर्न सक्नुहुन्छ। मह दुखाइ राहत र घाउ को निको प्रचार compresses।
बच्चा को मूत्र मा देखा oxalate: कारण, लक्षण, उपचार
किन यो अक्सर नाक बाट आक्रान्त गर्छ?
को स्नायु प्रणाली को somatoform autonomic रोग चिनारी लक्षण के के हुन्?
वृद्धि लालास्रवण - एक लक्षण?
बच्चा को कान गांठ: तिनीहरूले किन देखा गर्छन्?
साबुन, प्रत्येक हेर्नुपर्छ जो। रूसी टिभी श्रृंखला। साबुन युद्ध 1941-1945। सबैभन्दा रोचक श्रृंखला
साहित्यमा एपटेथहरू के हुन्। Epithets - यो के हो? रूसी मा एपिटेट्स को महत्व
"समूह नीति ग्राहक" मा हस्ताक्षर तपाईंले रोक्छ। म यो कसरी अक्षम?
"अमेरिका पत्ता लगाउनुहोस्": phraseologism मूल्य उदाहरणहरू अभिव्यक्ति पर्याय को टोन
कसरी फ्रिज defrost गर्न
मुश्किल पहेली र बच्चाहरु को लागि बक्स बाहिर सोच
अभोकाडो: फल लाभदायक गुण विदेशी
Stavropol हवाई अड्डा। हामी उहाँको बारेमा के थाहा?
मेट्रिक: तालिका, एकाइहरु र स्तर। मेट्रिक प्रणाली र एकाइहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली
जॉन को अग्रगामी को क्रिसमस: छुट्टी को सुविधाहरु, इतिहास र दिलचस्प तथ्यहरु। यूहन्नाको बप्तिस्माको क्रान्तिको विवरण: वर्णन
विश्वसनीय विमान Transaero। समीक्षा
र तपाईं एक सीजर सलाद कसरी बनाउने थाहा छैन?